Fanadihadiana UHANS Max 2: efijery 6,44 "ary fakan-tsary 4 ho an'ny € 130 | Androidsis ihany
Fanadihadiana UHANS Max 2: efijery 6,44 and ary fakan-tsary 4
fa manatsara hatrany ny kalitaon'ny mpanamboatra sinoa isan'andro isan'andro dia zavatra tsy resahin'ny olona intsony. Lasa ireo fotoana izay tsy dia nisy kalitao ny finday avo lenta sinoa raha oharina amin'ireo mpanamboatra hafa; ankehitriny isan'andro izy ireo dia manintona terminal hatrany ho an'ny mpividy rehetra. Ary izany no tranga UHANS Max 2, terminal iray natao ho an'ireo te hanana fitaovana lehibe amin'ny vidiny ambany dia ambany. Ho an'ny € 130 ihany ao amin'ny Gearbest dia azonao atao ny manana terminal misy manaitra Efijery 6,44 inch. Te hahita antsipiriany bebe kokoa momba ity smartphone ity ve ianao? Aza adino ny famerenantsika tanteraka.
1 Fandaminana sy fampisehoana UHANS Max 2
2 Fakantsary 4
3 Toetra ara-teknikan'ny UHANS Max 2
4 Vidiny ary aiza no hividianana ny UHANS Max 2
7 UHANS Max 2 Photo Gallery
Fandaminana sy fampisehoana UHANS Max 2
Uhans Mx 2 vs ny iPhone X vaovao
Ny endrika ary ambonin'izany rehetra izany Efijery 6,44 inch no singa hita maso indrindra ary izay manamarika indrindra ny Max 2. Ny efijery dia tontonana IPS miaraka amin'ny vahaolana Full HD 1920 x 1080 teboka izay tonga miaraka amina chassis aluminium 176.5 x 89.2 x 9.2 mm izay mahatonga ny sety farany hijerena ny famolavolana tena milamina sy matihanina Na dia marina aza fa nentim-paharazana ihany koa izy io ary tsy misy fanavaozana mikasika ireo terminal farany hitantsika eny an-tsena. Ny fikasihana koa dia tena marina ary ny kalitaon'ny fitaovana dia tena tsara, noho izany dia hitantsika ny terminal iray izay mijery eo an-tànana mihoatra lavitra noho ny vidiny. Amin'ny maha-teboka ratsy azy, mora foana ny vavahady, ka mila mitandrina ianao amin'izany.
Na eo aza ny refy lehibe an'ity fitaovana ity, ny lanjany dia 245 grama fotsiny izay tena tsara ho an'ny terminal misy ireo toetra ireo.
Ny iray hafa amin'ny tanjaky ny terminal dia mikasika ny fakantsary. Ny Max 2 dia tonga miaraka aminy fakan-tsary roa amin'ny lafiny aloha sy aoriana. Ny fakan-tsary any aoriana dia 13 megapixels 2 + 13 miaraka amina flash indroa ary ny fakan-tsary an-tsokosoko kosa manome 2 + XNUMX MP miaraka amina flash LED izay mora ampiasaina amin'ny fakana sary amin'ny toerana maivana.
Noho ny fisian'ny fakantsary roa sosona, ny mpamaky ny rantsantanana Eo amin'ny bokotra an-trano no misy azy. Ho ahy manokana dia io no toerana ahazoako aina indrindra amin'ny fampiasako azy, saingy efa tsapan'ny rehetra izany.
Toetra ara-teknikan'ny UHANS Max 2
Tsy amin'ny sehatra hita maso ihany, ny UHANS Max 2 dia ambonin'ny zavatra antenaintsika ho an'ity karazana elanelam-potoana ity, amin'ny haavo herinaratra no anompoana azy tsara koa noho ny Processeur MTK6750T 1,5 GHz sy 4 GB an'ny RAM ary ROM 64 GB. Izany rehetra izany miaraka amin'ny rafitra fiasa Android 7.0 nougat dia mahatonga ny Max 2 hampihatra fampiharana mavesatra hatrany.
4.300 mAh ny bateria izay tsara be. Ny olana dia noho ny haben'ny efijery lehibe dia mitombo ihany koa ny fihinanana maharitra 10 ora fotsiny miaraka amin'ny fampiasana mahery vaika sy 10 andro amin'ny maody mijoro.
Ny ambiny amin'ireo toetra ara-teknika dia azo jerena amin'ity latabatra famintinana manaraka ity:
efijery «IPS Capacitive 6 44 santimetatra misy vahaolana 1920 x 1080 »
processeur «64bit MTK6750T 1 5 GHz Octa Core »
Fahatsiarovana RAM 4GB
Fahatsiarovana ROM 64GB
Slot SD "Ie microSD hatramin'ny 256GB »
Operating System "Android 7.0"
Efitra lehibe «Double miaraka amin'ny vahaolana 13 MP + 2 MP»
Fakan-tsary faharoa «Double miaraka amin'ny vahaolana 13 MP + 2 MP»
Fiampangana haingana Si
seranana Micro USB
écouteur «Eny (mini jack 3 5mm) »
Conectividad «Wifi Eny 802.11 b / g / n »
onjam-peo na dia mila headset aza ianao
lafiny "17.65 x 8.92 x 0.92 cm"
lanja Gramin'ny 245
loko «Mainty sy volamena»
Red «Technologies / Bands 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz - 3G: WCDMA 900 / 2100MHz - 4G: LTE FDD-800/900/1800/2100 / 2600MHz»
vidiny 132 €
Vidiny ary aiza no hividianana ny UHANS Max 2
Ny UHANS Max 2 dia vidin'ny € 132. Amin'ny haavon'ny sandam-bola dia miatrika terminal izay manome antsika betsaka lavitra noho izay vidiny amin'ny inona fividianana mazava io ho an'ireo rehetra mitady terminal lehibe misy fampisehoana antonony sy amin'ny vidiny mirary.
Efijery 6,44 santimetatra
Grates mora foana
UHANS Max 2 Photo Gallery
Tsindrio ny sary tsirairay mba hahitana ny pitsopitsony rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fanadihadiana UHANS Max 2: efijery 6,44 and ary fakan-tsary 4
Tonga any Espana amin'ny fomba ofisialy ny Nubia Z17S
Nidina tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny BlackBerry KEYone